Product pfungwa - Dongguan Yuechuang kushandisa michina Co., Ltd
Akangwara, vakarongeka uye akatsiga - Regai motokari connector kugadzirwa zvikuru akangwara uye basa, kuti motokari njodzi uye kupfuura yakavimbika! The motokari indasitiri ndiro guru pane ose uye kukosha mumaindasitiri munyika, kuratidza kuitika nokukurumidza, pasi kwezvinhu chimurenga uye mumaindasitiri patsva pasi pakanyorwa nokukurumidza kukura yose motokari indasitiri kuchaita vakananga interoperability, mufambo, nokuzvidzora kutyaira, mushandisi ruzivo uye guru date kuongorora.
Semabhiriji unobva motokari redunhu, iro motokari connector wakakurira ingaita dredging redunhu uye nokuchinja magetsi ari motokari, zvichiita electronic ouinjiniya michina nevakawanda rakaiswa mune motokari indasitiri, kunyanya nokuda Automotive Electronics.
With pave itsva rwokugadzira uye simba motokari itsva, iyo kwakabatana motokari uye otomatiki kutyaira, uwandu Data hutachiwana uye utsanzi kuti motokari guru emuviri uye exponential kukura, asi motokari connector rakavimbika zvinodiwa pamatunhu kakawanda, mukuru voltage uye ano ezvinhu zvakawanda uye zvikuru yakakwirira, miniaturization, kuchengeteka, kuvimbika, kudzivirirwa kwezvakatipoteredza ndiye kukura remangwana mirayiridzo Automotive connector.
Kuti vawane pamwero mukuru vakawanda kugadzira, connector kugadzirwa mugadziri vanofanira kusimudzira Standardization nezvezvakanga mubishi iyi maindasitiri kushanduka.
Yue Chuang ari nyanzvi motokari connector otomatiki gungano muchina bhizimisi, nemakore 10 zvazvakanakira R & D uye kugadzira maindasitiri, mune akangwara, vakarongeka uye akatsiga chigadzirwa pfungwa, vakaraira kudzora kurimwa quality, kupa munhu zvichienderana motokari connector gungano muchina kushandisa michina customized zvingaitwa kundosangana chaiko zvinodiwa kugadzirwa motokari connector, connector kubatsira vagadziri kuita connector kushandisa michina dzaFord ndiwedzere, rinorema remaoko, kwainoita kugadzirwa muitiro, chigadzirwa unhu kugadzikana, kuvandudza kugadzirwa kushanda kuvandudza motokari connector connector, kurimwa Kushanda uye makwikwi akaitwa ..
chiratidzo wedu: kuva nenyika kirasi yokutanga motokari connector gungano muchina muchiso, kuti motokari connector kugadzirwa zvikuru akangwara uye basa, kuti motokari njodzi uye kupfuura yakavimbika! Ichi basa redu uye rine simba redu.
Ipai mazhinji zvingaitwa nokuti automaton rose connector kuti vatengi, kugamuchira kunoshanyira fekitari uye taurirana basa, takagadzirira kugadzirwa emakambani ane motokari connectors nokusunungura mafundo, kugamuchira vakasununguka kubvunza nekukumbirira upgrading uye munhu kugadzirwa kushandisa michina connector mhinduro.